Qab-qabashada Culimada oo weli ka socota dhulka Xarameynka, iyo Sheekh Cusub oo Xabsi la dhigay!
Maamulka Aala-Sucuud ayaa halkiisa kasii wada qab-qabashada culimada iyo ducaada ku dhaqan dhulka Xarameynka. Sida uu baahiyay xisaab barta Twitterka ah oo faafiya wararka culimada iyo ducaada uu xir xirayo maamulka Aala-Sucuud ayaa xaqiijiyay in ciidamada Amaanka ay xabsiga dhigeen sheekh Cali Al-Qaamidi oo kamid ah culimada waaweyn ee Xarameynka. Ciidamada amaanka ayaa u daatay guriga sheekha, waxaana la qabtay ...	Read More »
Magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhaca qaraxyo iyo dilal rasaas loo adeegsado kuwaasoo ay fuliso xarakada mujaahidiinta alshaab. dad badan oo shisheeyaha iyo kaaliyaashiisa ka kooban ayaa hurdada ka salala marka daaqaduhu dhawaaqaan iyagoo u qaata in loo soo dusay oo in qoorta laga gooyo ama rasaas lagu shaq shaqo keliya harsan tahay. Raga qaar caruurtii u dhalatay ...	Read More »
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 07-11-1439
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij todobaadle ah, oo lagu soo gudbiyo arimaha Caalamka Islaamka markaas ka taagan. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 20-07-2018 Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 20-07-2018 Tayo dhexe	Read More »
warka duhurnimo waxa uu kamid yahay saddexda war ee ka baxa idaacada alfurqaan,waxaana maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 20 07 2018.	Read More »
Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Shirkii Brussels. (Dhageyso)
Barnaamijka Diiradda JImcaha oo alaaba lagu falanqeeyo qodobka todobaadka ugu weyn ayaa waxaa maanta diiradda lagu saaray shirkii usbuucan ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka. Waxaa marti ku ahaa dad waaya arag ah islamarkaana la socday shirka iyo habka uu u dhacayay, waxaana si gaar ah la isku dul taagay qodobadii ugu waaweynaa ee shirkaasi kasoo baxay. Ku Dhageyso ...	Read More »
Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo
warka subaxnimo waxa uu kamid yahay saddexda war ee ka baxa idaacada alfurqaan,waxaana maanta lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 20 07 2018	Read More »
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Oo La Wareegay deegaanka Af-urur.
Boqollaal Askari oo aad u hubeysan, kana tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka waxay galeen deegaanka Af-Urur ee gobolka bari, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan maamulka Puntland. Sida ay sheegayaan dadka deegaanka, ciidamada Mujaahidiinta ayaa dagaal la’aan kula wareegay deegaanka Af-urur, kadib markii gelinkii dambe ee shalay ciidamada maamulka Puntland ay isaga carareen Af-urur, iyagoo ...	Read More »
halkaan ka dhegeyso barnaamijka dhuuxa wareysiyada
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada Idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo caawo qodobo kala duwan oo xiiso leh lagu soo qaatay. Halkaan ka dhegeyso barnaamijka dhuuxa wareysiyada 19 07 2018.	Read More »
halkaan ka dhegeyso warka duhurnimo.
Insha allaah halkaan waxaad kaga bogan kartaan warka duhrnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan. Halkaan ka dhegeyso war duhur 19 07 2018	Read More »
Magaalooyinka Kufriya iyo Al-Fowca ee gobolka Idlib oo laga barakiciyay Shiicada.
Dhamaan dadkii shiicada ahaa ee ku go’doonsanaa mudada dheer magaalooyinka kufriyaa iyo Al-fowca ee gobolka Idlib ayaa gebi ahaanba laga daabulay halkaas, iyagoo aaday dhanka magaalooyinka uu Nidaamku ka taliyo. Dhowr gaari oo noocyada basaska ah oo markii hore soo qaaday qaar kamid ah dadka kasoo barakacay koonfurta Suuriya ayaa laabtay iyagoo wada boqollaal ruux oo kamid ah dadka shiicada ...	Read More »